Thenga izithako ze-PCT ezisebenzayo | Isitolo se-SARM
Ukusekelwa kwe-PCT & Cycle
Hlunga nge Best Ukuthengisela Inani, eliphansi kuya phansi Intengo, ephansi kuya phezulu
Amalebhu Omzimba Akhiwe Ama-Paps 90 Amaphilisi
Ilinganiswe i-4.9 ngaphandle kwe-5
Amalebhu Omzimba Akhiwe Ama-Sarms Cycle Support 90 Amaphilisi
Amalebhu Akhiwe Ngomzimba Testo Boost 90 Capsules
I-Alpha Labs Armistane 50mg 90 Amaphilisi
I-Alpha Labs Laxogenin 100mg 90 Amaphilisi
Amalebhu Wokwakha Umzimba Ama-Carb Cruncher Ama-90 Amaphilisi
I-PCT Post Cycle Therapy Stack
Ilinganiswe i-5.0 ngaphandle kwe-5
Leli qoqo elilandelayo yilokho esikufaka kwiSARMs Store UK njengokwesekwa okuhle kakhulu komjikelezo wamaSARM. Funda kabanzi mayelana nokuthi kungani ukwesekwa komjikelezo kubalulekile nemikhiqizo emihle kakhulu yokwelashwa kwangemva komjikelezo.
Kuyini ukwesekwa komjikelezo?
Ukusekelwa komjikelezo obizwa nangokuthi ukusekelwa kwesibindi, yimikhiqizo ethathwe ngesikhathi somjikelezo wamaSARM noma umjikelezo weprohormone. Le mikhiqizo yenzelwe ukuvikela umzimba nezitho zomzimba emiphumeleni emibi eyingozi futhi kukhulise ukuzuza okwenziwe phakathi nomjikelezo wama-SARM.
Kungani ukwelashwa ngemuva komjikelezo kubalulekile?
Ukwelashwa kwe-Post-cycle (PCT) kusiza umzimba ukuthi ululame ngemuva komjikelezo wabathuthukisi bokusebenza. Le mikhiqizo ivame ukucindezela ama-hormone ngenkathi abasebenzisi bewathatha, okungathatha inani kwinqubo yomzimba yokukhiqiza i-testosterone.
Ngemuva komjikelezo we-SARM noma we-prohormones, kubalulekile ukuthi abasebenzisi bagcwalise amazinga we-testosterone yomzimba wabo. Ngaphandle kwakho, ukululama kuzohamba kancane futhi abasebenzisi bangathola ukukhathala okukhulu futhi kokunye ukucindezeleka. Ukuthatha ama-PCT kubalulekile ekulondolozeni inhlalakahle yonke ngemuva kokuthi umzimba udlule kumjikelezo wesithuthukisi. Ngaphandle kwawo, umzimba uzothatha isikhathi eside ukuthola.
Sincoma le mikhiqizo elandelayo ye-post-cycle therapy (PCT) nokusekelwa komjikelezo.
Ukusekelwa komjikelezo wamaLebhu Akhiwe Omzimba
Lo mkhiqizo wenzelwe ukuthi uthathwe eceleni komjikelezo wama-SARM. Kuvikela izitho nomzimba ukuze abasebenzisi bathole izinzuzo eziphezulu kumjikelezo wabo wama-SARM. Lo mkhiqizo uzokhulisa ukwesekwa kanye nemiphumela ukuze umzimba uthole konke okudingayo ngenkathi uku-SARM nokuqeqeshwa okunamandla. Lokhu kusekelwa komjikelezo kuqukethe
Imbewu yamagilebhisi isusa
Tribulus Terrestris Khipha
Saw Palmetto Khipha
Isitshalo sembewu yesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Abasebenzisi kufanele bathathe amaphilisi amathathu kanye ngosuku kanye namanye ama-SAR abawathathayo.
Ama-Labs Akhiwe Ngomzimba PCT
Lo mjikelezo we-SARM PCT wenziwa ngezinto zonke zemvelo ukusiza ukuvikela umzimba wakho emiphumeleni emibi ye-estrogenic futhi kukusize ugcine izinzuzo ezivela kumjikelezo wama-SARM. Nazi izithako ezibalulekile kule PCT:
I-Ashwagandha Extract - ikhambi le-adaptogenic elisetshenziswe amakhulu eminyaka ukukhulisa amasosha omzimba nokwenza ngcono amandla jikelele
Tribulus Terrestris Extract - isitshalo eselaphayo esaziwa ngekhono laso lokwehlisa i-cholesterol noshukela wegazi
Rhodiola Rosea Extract - Khulisa ukumelana komzimba nengcindezi
Le PCT kufanele ithathwe kathathu nsuku zonke ngomthamo wamaphilisi amathathu ngemuva kokudla ngakunye.
Amalebhu Akhiwe Ngomzimba Testo Boost
Lo mkhiqizo wenzelwe ngqo ukusiza ukukhulisa amazinga e-testosterone emzimbeni futhi kuthuthukise inhlalakahle nokuzethemba okuphelele. Kuyasiza futhi ukukhulisa amandla nokuqina amazinga. Nazi izithako ezibalulekile:
I-Tongkat Ali - imbiza yokwelapha eyaziwa ukwelapha amazinga aphansi e-libido ne-testosterone
I-Stinging Nettle - Isiza ukwelapha i-arthritis futhi iphakamise amazinga e-antioxidant egazi
Kunconywa ukuthi abasebenzisi bathathe amaphilisi amathathu kanye ngosuku kanye nokudla.
I-Animal Pak ithandwa kakhulu ngama-SAR kanye nabasebenzisi abathuthukisa ukusebenza. Iqukethe izithako ezibalulekile ezingaphezu kwama-60 ezivimbela ukwakheka kwezikhala zomsoco. Kuyasiza ukondla imisipha ngokuletha izithako ezifana nama-amino acid abalulekile, ama-carbs, namanye amavithamini namaminerali.
I-Animal Pak imile isikhathi eside ngoba iyasebenza futhi ngoba isiza abasebenzisi amandla ngamathafa wokuqina.